Su'aalaha iyo Jawaabaha EBT
Sideen ku heli karaa waxtarradaydii kaararka EWIC?
Shaqaalaha rugaha caafimaadku waxay soo saari doonaan walxahaaga cuntada sidii hore. Macaashkaaga bil kasta wuxuu ku jiri doonaa xisaabtaada taariikhda bilowga. Marka aad iibsaneyso cuntadaada la ogolaaday, dheelitirka xisaabtaada ayaa hoos u dhigi doonta.
Faa'iidooyinka waxay kuugu jiri doonaan xisaabtaada EBT ee 12: 00 bartamihii bilowga iyo waxay ku dhici doontaa 12: 00 bartamaha maalinta dhammaadka.
PIN waa afar lambar sir ah oo u ogolaanaya inaad isticmaasho kaarkaaga eWIC. Ha u sheegin PIN-kaaga qof aanad u fasaxin inaad isticmaasho kaarkaaga. Haddii qof uu yaqaan PIN-kaaga oo ay isticmaalaan kaarkaaga si aad u hesho gargaarkaaga cuntada adigoon fasax lagaa haysan, faa'iidooyinkaasi looma beddeli doono. Sidoo kale waa inaadan ku qorin lambarkaaga PIN kaarkaaga ama meel kasta oo qof laga heli karo, sida boorsadaada ama boorsadaada.
Maxaa dhacaya haddii aan iloobo PIN?
Haddii aad illowday lambarkaaga PIN, la xiriir kilinigaaga WIC. Markaad doorato PIN, waa inaad doorataa afar lambar oo fudud oo aad xasuusato, laakiin aad u adag tahay qof kale inuu ogaado (tusaale ahaan, dhalashada ilmahaaga ama waalidka dhalashadiisa).
Haddii ay dhibaato kaa haysato inaad xasuusato lambarkaaga PIN, HA ha isku dayin inaad sheegto lambarkaaga PIN marka aad geleyso terminaalka POS. Haddii aadan galin PIN-da saxda ah ee 4th isku day, xisaabtaada waa la xiri doonaa si looga ilaaliyo qof ku qiyaaso lambarkaaga PIN iyo adigoo isticmaalaya faa'iidooyinkaaga cuntada. Waa inaad sugto illaa saqda dhexe badhka koontadaada si aad mar labaad isku daydo.
Maxaan sameeyaa haddii qof uu ogaado lambarkayga PIN?
Haddii qof uu leeyahay PIN-gaaga oo aan haysanin, isla markiiba la xiriir kilinigaaga WIC si aad u bedesho lambarkaaga PIN.
Sidee baan ku ogaanayaa miisaaniyaddayda akoontiga cuntada?
Habka ugu fudud ee lagu ogaanayo baaqigaaga xisaabtan waa inaad ku keydiso risiidhadaada. Haddii aadan haysan risiidhka ugu dambeeyey, waxaad ku hubin kartaa dheelitirka kaarka akhristaha kaarka EBT ee rugta ama dukaanka. Waa inaad marwalba hubiso caddadka cuntooyinka la oggol yahay ee ka hartay ka hor intaadan dukaanka.
Maxaa dhacaya haddii mishiinka POS uusan shaqeynin?
Mishiin kale oo POS waa in la isku dayaa ama waxaad tagi kartaa dukaanka kale ee kaqeybgalaya.
Maxaa dhacaya haddii kaarkeygu shaqeyn waayo?
La xiriir kilinigaaga WIC. Waxaa laga yaabaa inaad hesho kaarka bedelka.
Maxaan sameeyaa haddii aan lumiyo kaarkayga?
Haddii kaarkaaga eWIC uu kaa lumo ama la xado, la xiriir kilinigaaga WIC waxayna soo saari doonaan kaarka bedelka.
Badbaadi kaarkaaga eWIC! Xataa marka cuntadaada WIC la isticmaalo, kaarkaaga eWIC waa la isticmaali karaa. Gargaarkaaga xigta waxaa lagu heli doonaa kaarkaaga eWIC.
Isticmaal kaarkaaga EBT
1. Hubi Lacagta Xisaabtaada
Haddii uu jiro akhristaha kaarka EBT, hubi dheelitirka ka hor dukaameysiga. Kaarkaaga xoqo oo gal PIN-kaaga si aad u hesho dheelitirkaaga.
2. Ku duub Raashinkaaga WIC
Haddii manfacyadaada ay ka mid yihiin qalalan ama digirta / digirta, waxaad ka iibsan kartaa sanduuqa 16 ounce ama qasacadaha 4-16 ounce ee digirta qasacadaysan / digirta. Dhammaan digsiyada 4 uma baahna in la iibsado hal mar, laakiin markaad billowdo inaad iibsato gasacadaha, dheelitirkaaga hadhaaga ah ee qadarku wuxuu noqonayaa qasacadaha qoyan ee la qalajiyey si aan looga iibsan qaybtaas ka mid ah miisaankii hadhay.
U diyaarso kaarkaaga WIC EBT.
Ka hor inta aanad u baahnayn cuntada, u sheeg dukaanka dukaanka aad isticmaaleyso kaarka WIC EBT.
Marka lacagtu kuu sheegto, ku dhaji kaarkaaga akhristaha kaarka WIC EBT ama kaarkaaga elektarooniga ah u dhiib qofka dukaanka.
Qalabka cuntada iyo qiimaha doolarka ee miro iyo khudaarta cusub ee aad iibsato waxaa laga jarayaa koontadaada. Xaddiga saxda ah ee iibsiga cuntadaada la ogolaaday waxaa laga jarayaa koontadaada lacagta WIC.
Karraaniga ayaa ku siin doona rasiid. Risiitadani waxay tusi doontaa qaddarka iyo tirooyinka (haddii ay jiraan) ee cuntada WIC wali ka tagtay xisaabtaada.
4. Kaar Kaarkaaga
Kaadhkaaga waa la isticmaali karaa.
Xitaa marka dhamaan cuntooyinkaaga la tago, ha kaarkaaga ka saarin.
Ha leexin kaarkaaga.
Kaarkaaga ka fogow magnets iyo qalabka elektarooniga ah, sida TV'yada, raadiyaha, VCRs, mikrodrushka, taleefannada gacanta, iwm.
Ha ku dhejin kaarkaaga qorraxda tooska ah, sida gaarigaaga gaariga.
La xiriir goobta WIC ee deegaankaaga ama miiska Caawinta Kentucky WIC 1-877-597-0367 xulashada koowaad oo leh su'aalo.
Wixii taageero ah ee barnaamijka WICShopper, email wicshopper.support@jpma.com.
Liistada Cuntada ee WIC
Eeg liiska cuntada ee Ingiriisiga
Wixii warar ah ee la qoro
Bayaanka Takoor la'aanta USDA WIC
Iyadoo la raacayo sharciga xuquuqda madaniga ah ee Federaalka iyo Waaxda Beeraha Mareykanka (USDA) xeerarka iyo siyaasadaha xuquuqda madaniga, USDA, Hay'adeeda, xafiisyadeeda, iyo shaqaalaheeda, iyo hay'adaha ka qeyb qaadanaya ama maamulaya barnaamijyada USDA waa ka mamnuuc takoorid ku saleysan midab, midab, asal qaran, jinsi, naafonimo, da ', ama aargudasho ama aargoosi waxqabadyada xuquuqda madaniga ah ee hore barnaamij kasta ama hawl kasta oo ay qabato ama maalgaliso USDA.
Dadka naafada ah ee u baahan qaabab kale oo isgaarsiineed oo loogu talagalay macluumaadka barnaamijka (tusaale, farta indhoolayaasha, daabacaad weyn, cajalad maqal ah, Luqadda Dhagoolayaasha Mareykanka, iwm.), Waa inay la xiriiraan Hay'adda (Gobol ama maxalli) meesha ay ka codsadeen dheefaha. Shaqsiyaadka dhagaha la ', ama maqalka culus ama naafada ka ah hadalka waxay la xiriiri karaan USDA iyaga oo u maraya Adeegga gudbinta ee Federaalka (800) 877-8339. Intaa waxaa sii dheer, macluumaadka barnaamijka waxaa lagu heli karaa luuqado aan ahayn Ingiriis.
Si aad u fayl garaysato cabasho barnaamij takooris ah, buuxi Foomka Cabashada Takoorka Barnaamijka USDA, (AD-3027) laga helay khadka tooska ah ee internetka: Sidee loo Diiwaangeliyaa Cabashada, iyo xafiis kasta oo USDA ah, ama warqad u qor USDA oo ku qor warqadda dhammaan macluumaadka lagu codsaday foomka. Si aad u codsatid nuqul ka mid ah foomka cabashada, wac (866) 632-9992. U soo gudbi foomkaaga ama waraaqdaada oo dhammeystiran USDA adoo:
boostada: Waaxda Beeraha ee Mareykanka
fakiska: (202) 690-7442; ama
Para soo bandhigida iyo ku takrifalka, si aad u dhamaystirto Foomka Nidaamka Diiwaangelinta, (AD-3027) Que está lánea en línea en: Sidee loo Diiwaangeliyaa Cabashada. waa in aad ka mid noqotaa USDA, si aad u ogaatid inaad u diri doonto USD USD iyo in aad la socoto si aad ula socoto. Para qadarin si aad u kala hor mariso, laame al (866) 632-9992. Haga waxaad ka heleysaa foomka leyno o qiyaasta USDA por:
(1) correo: Waaxda Beeraha ee Mareykanka Xafiiska Kaaliyaha Xoghayaha Xuquuqda Madaniga